Moodle at Minnesota State University, Mankato: Soo gal goobta
Halkan ma markii kuugu horeysabaa ?
Asalamu caleykum! Inaad marin buuxa u hesho koorsooyinka waxaad u baahantahay hal daqiiqo ood ku sameysato akoon cusub. Mid kasta oo ka mid ah koorsooyinka waxa laga yaaba gooni ahaantooda iney lahaadaan "fure is-qoritaan", oo mar kaliya la isticmaalayo oo aadan u baahannaneyn ilaa wakhti danbe mooye. Waa kuwan tallaabooyinku:
Ku buuxi foomka Akoonka Cusub faahfaahinta arrimhaaga.
Email ayaa markaaba loo soo diri cinwaanka emailkaaga.
Akhri emailkaaga, oo guji xidhiidhinta webka ah ee ay wadato
Akoonkaaga waa la xaqiijin doonaa oo wa laguu oggollaan inaad soo gasho
Haddaba, xulo koorsada aad rabto inaad ka qayb qaadato
Haddii ay kuu soo baxdo "Fure is-qoritaan" -ka macallinkaagu ku siiyey isticmaal.Taas ayaa ku "qori" koorsada
Koorsadii oo dhan ayaad markaa marin u heli. Hadda waxa laga bilaabo markaa waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad galiso isticmaale-magacaaga iyo isgarad-ereygaaga ama Passwordkaaga (foomka boggan ku yaal) inaad dhex gasho oo aad marin u hesho koorso kasta oo aad is-qortey.
ka-bood si aad u sameyso koonto
Kukiyada waa in karti loo siiyaa biraawsarkaaga